Coral, sehatra faharanitan-tsaina artifisialy an'i Google mitovy amin'ny RPI | Avy amin'ny Linux
Darkcrizt | | maro
Tsy misy isalasalana Ny iray amin'ireo toetra mampiavaka ny AI dia ny famelana ny milina hanao karazana asa rehetra izay natokana ho an'ny olombelona teo aloha, ho fanampin'izany dia manampy betsaka amin'ny fandefasana automatique maro, manatsara ny asa maro ho an'ny olona. Mety efa naheno momba ny Coral ianao fitaovana natao ho an'ny sehatr'i AI izay mitombo mihombo.
Izay hanomezana izay ilaina avy amin'ny mpanjifa, Coral manolotra karazana vokatra roa lehibe: mpandeha haingam-pandeha sy tabilaom-pivoarana ho an'ny prototyping hevitra sy modules vaovao hampandehanana ny ati-doha hakingan-tsaina amin'ny fitaovana famokarana toy ny fakan-tsary sy sensor.
Amin'ny tranga roa, ny fon'ny fitaovana dia ny TPU Edge an'i Google, chip ASIC nohamarinina mba hampandehanana algorithma fianarana milina maivana, kinova kely an'ny TPU cooled izay ampiasaina amin'ny mpizara rahona an'ny Google.
Ny maodely Coral USB Accelerator dia manana chip elektronika izay ampiasaina amin'ny fitsaboana artifisialy artifisialy vita eo an-toerana. Natao ho peripheral mora mifandray, ny modely Coral USB Accelerator manome ny nanocomputer Raspberry Pi ny faharanitan-tsaina rehetra Edge TPU integrated circuit.
Miaraka amin'ny fahaizana mihazakazaka tambajotra tsy miankina amin'ny RPi mihitsy, azonao atao ny mampiditra haingana ny fahafaha-manao artifisialy amin'ny tetikasanao, ary miaro ny tsiambaratelon'ny datao.
Mba hamoronana ny tambajotranao ary apetraho amin'ny dingan'ny fianarana, ireo mpamorona manana TensorFlow. Ka mila manangona sy mampandeha azy ireo amin'ny karatra Edge TPU fotsiny izy ireo amin'ny alàlan'ny rindrambaiko omena. Vantany vao tafapetraka ny tamba-jotra voangona dia vita eo an-toerana ny kajy rehetra eo amin'ny faribolana Edge TPU, tsy mandefa data amin'ny rahona. Esorina ny lag lagsy, hatsaraina ny asany ary ny data-n'ny mpampiasa dia voafehy eo an-toerana.
Toy ny Intel Movidius Neural Compute Stick navoaka herintaona lasa izay, Coral USB Accelerator dia mampiditra ny ASIC mahazatra anao amin'ny endrika fitaovana mora ampiasaina izay mitovy be amin'ny kapila mangirana. Na izany aza, rehefa mampitaha ny roa mifanila dia hita fa misy fahasamihafana.
Ny karatra Coral Dev dia misy karatra mifototra amin'ny fifandraisana:
Fifanarahana fampisehoana DSI
Fifanarahana fakan-tsary MIPI-CSI
Seranana Gigabit Ethernet
Jack jack audio
4mm terminal 2,54-pin ho an'ny mpandahateny stereo
Fampifandraisana HDMI 2.0 feno habe
Mikrofona PDM niomerika roa sy lohateny GPIO 40-pin.
Mifamatotra amin'ny karatra ifotony dia rafitra modely azo esorina (SoM) 40x48mm namboarina manodidina ny NXP i.MX 8M processeur ary ny TPU Edge mihitsy. Ny SoM dia manana coprocessor cryptographic, Wi-Fi anatiny, ary Bluetooth 4.1 fanohanana, ary koa 1GB an'ny LPDDR4 RAM sy 8GB an'ny eMMC.
Etsy ankilany Coral, manana ny rafitra misy azy izay MendelLinux de miorina amin'ny fototra Debian ary mifanentana tanteraka amin'ireo tahirim-bolan'ity tetikasa ity (satria mampiasa fonosana mimari-droa tsy nasiam-panovana sy fanavaozana avy amin'ny repositories lehibe Debian).
Ny sehatra Coral misy koa maodely efa voaomana (manangana mialoha sy mianatra mialoha), nohamarinina ho an'ny chip TPI elektronika Edge TPU. Ireo modely malefaka ireo dia manamora ny fandefasana programa sy mifanaraka amin'ny fampiharana anao manokana.
Raha ny fitaovana dia afaka ampiasain'ny injeniera hamorona tetikasa, Coral dia manolotra mpitari-dalana momba ny fomba fananganana milina fanasokajiana marshmallow sy mpamahan-borona hendry, ohatra.
Ho fanampin'ny tanjona maharitra amin'ny takelaka, dia ny tanjony hampiasana ny mpanjifa orinasa amin'ny indostria toy ny fiara sy ny tontolon'ny fahasalamana.
anefa Coral dia mikendry ny tontolon'ny orinasa, ny tetik'asa dia miorim-paka ao amin'ny kitapom-bokatra milina «AIY» an'ny Google.
Navoaka tamin'ny taona 2017 ary nateraky ny solosaina Raspberry Pi, ny fitaovana AIY dia mamela ny olon-drehetra hanangana mpandahateny sy fakan-tsary marani-tsaina ary tena nahomby tamin'ny mpamokatra STEM sy ny tsenan'ny kilalao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » maro » Coral, sehatry ny fahaizana artifisialy Google mitovy amin'ny RPI